San Wolfgang di Ratisbona,Santo del giorno per il 31 ottobre | Io amo Gesù
St. Wolfgang nke Regensburg, Senti nke ụbọchị 31 Ọktoba
di Paolo Tescione - Ọktoba 31, 2020
Saint nke ụbọchị maka October 31
(c.924 - Ọgọst 31, 994)
Akụkọ banyere St. Wolfgang nke Regensburg
A mụrụ Wolfgang na Swabia, Germany, ma gụọ akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ dị na Reichenau Abbey. Do ke ​​enye okosobo ye Henry, akparawa erenowo emi akakabarede edi akwa bishop ke Trier. Ka ọ dịgodị, Wolfgang nọgidere na-enwe mmekọrịta chiri anya na achịbishọp, na-akụzi ihe na ụlọ akwụkwọ katidral ya ma na-akwado mbọ ọ na-agba ịgbanwe ndị ụkọchukwu.
Mgbe achịbishọp nwụrụ, Wolfgang họọrọ ịbụ onye mọnk Benedictine wee kwaga na abbey na Einsiedeln, nke bụzi akụkụ Switzerland. E chiri ya ụkọchukwu, a họpụtara ya onye isi ụlọ akwụkwọ ebe obibi ndị mọnk ebe ahụ. E mechara ziga ya Hungary ka ọ bụrụ onye ozi ala ọzọ, ọ bụ ezie na ịnụ ọkụ n’obi na ịdị mma ya rụpụtara ihe dị nta.
Emperor Otto II họpụtara ya bishọp nke Regensburg, nke dị nso na Munich. Wolfgang malitere ozugbo mgbanwe nke ndị ụkọchukwu na ndụ okpukpe, na-eme nkwusa n'ike na ịdị irè ma na-egosikarị nchegbu maka ndị ogbenye. O yiiri mmọnwụ ma bie ndụ aghara aghara.
Oku nke ndu ndi mọnk akagbughi ya, tinyere ochicho nke ibi ndu. N'otu oge ọ hapụrụ diocese ya itinye onwe ya n'ekpere, mana ọrụ ya dị ka bishọp kpọrọ ya azụ. Na 994 Wolfgang dara ọrịa n'oge njem; nwụrụ na Puppingen dị nso na Linz, Austria. E nyere ya iwu na 1052. A na-eme mmemme ya n'ọtụtụ ebe etiti Europe.
Enwere ike igosi Wolfgang dị ka nwoke nwere ogwe aka afụkọta. Ọ gbalịrị ịla ezumike nká n'ekpere nke naanị ya, mana iji ọrụ ya kpọrọ ihe kpọghachitere ya na diocese ya. Ime ihe ekwesịrị ime bụ ụzọ ya nke ịdị nsọ, na nke anyị.
Incense: ihe okpukpe pụtara na ihe ndị ọzọ
Saint Faustina na-agwa anyị ihe isi ike dị na ekpere (site na ederede ya)
Udo na Saint Lucia: kedu etu esi eme ya!
N'ihi na Churchka dị oké mkpa nye Onye Kraịst ọ bụla.